Son Ye Jin နဲ့ Hyun Bin တို့ နှစ်ယောက်အတူခရီးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာ… – Trend.com.mm
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော်ကြယ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချော Son Ye Jin နဲ့ ပျိုမေတို့အသည်းစွဲမင်းသားချော Hyun Bin တို့ နှစ်ယောက်အတူခရီးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ မီဒီယာတွေထက်မှာပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။တကယ်ပဲလား?
တကယ်မဟုတ်တဲ့ ကောလဟာလသတင်းပါလို့ Hyun Bin ရဲ့ အေဂျင်စီကနေ ပြန်လည်ဖြေရှင်းချက်ထုတ်ထားတဲ့အကြောင်း Soompi မီဒီယာကနေဖော်ပြထားပါတယ်။အေဂျင်စီက “Hyun Bin က သူ့ရဲ့ စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ ယူအက်စ်ကို သွားခဲ့တာပါ။သူတုို့နှစ်ယောက်အတူခရီးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းက အမှန်မဟုတ်ပါဘူး”လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဇန်န၀ါရီ ၉ရက်နေ့တုန်းက Hyun Bin နဲ့ Son Ye Jin ဟာ နှစ်ယောက်သားလော့အိန်ဂျလိစ်ကို ခရီးထွက်ကြတယ်ဆိုပြီး သတင်းထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်သုံးစွဲသူတစ်ယောက်က “သူတို့နှစ်ယောက်ခရီးအတူထွက်လာကြတာဖြစ်မယ်။ယူအက်စ်မှာ သူမရဲ့ မိဘတွေနဲ့ ထမင်းအတူစားနေကြတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်”ဆိုပြီးရေးတင်ထားခဲ့တာပါ။Son Ye Jin ရဲ့ အေဂျင်စီကတော့ အဲ့ဒီပို့စ်ဟာ မမှန်ကြောင်း၊သူမက တစ်ယောက်တည်းခရီးထွက်သွားတာဖြစ်ကြောင်း၊ခါတိုင်းလည်း ဒီလိုပဲတစ်ယောက်တည်းခရီးတွေထွက်နေကျပါ”ဆိုပြီး ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် အေဂျင်စီက
Son Ye Jin ရဲ့ မိဘတွေက ကိုရီးယားမှာပဲရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့် သူတို့ကို ယူအက်စ်မှာ အတူတွေ့မြင်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းက ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး”ဆိုပြီးထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။
Son Ye Jin နဲ့ Hyun Bin တို့ဟာ ၂၀၁၈ အတွင်းမှာ “The Negotiation”ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာအတူတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေက သူတို့နှစ်ယောက်ဒိတ်ရင် ၀မ်းသာကြမယ်ဆိုပေမဲ့ အေဂျင်စီတွေရဲ့ဖြေရှင်းချက်အရတော့ ဘာမှသက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ ဇာတ်ကားလေးကလည်း အက်ရှင်ဒရာမာဇာတ်ကားလေးဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေလည်းအကြိုက်တွေ့မယ်ထင်ပါတယ်။မကြည့်ရသေးရင် ကြည့်လိုက်ဦးနော်
တောငျကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ နာမညျကြျောကွယျပှငျ့နှဈပှငျ့ဖွဈတဲ့ မငျးသမီးခြော Son Ye Jin နဲ့ ပြိုမတေို့အသညျးစှဲမငျးသားခြောံHyun Bin တို့ နှဈယောကျအတူခရီးသှားကွတယျဆိုတဲ့ သတငျးတှေ မီဒီယာတှထေကျမှာပြံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယျ။တကယျပဲလား?
တကယျမဟုတျတဲ့ ကောလဟာလသတငျးပါလို့ Hyun Bin ရဲ့ အဂေငျြစီကနေ ပွနျလညျဖွရှေငျးခကျြထုတျထားတဲ့အကွောငျး Soompi မီဒီယာကနဖေျောပွထားပါတယျ။အဂေငျြစီက “Hyun Bin က သူ့ရဲ့ စီးပှားရေးကိစ်စနဲ့ ယူအကျဈကို သှားခဲ့တာပါ။သူတုို့နှဈယောကျအတူခရီးသှားကွတယျဆိုတဲ့သတငျးက အမှနျမဟုတျပါဘူး”လို့ပွောခဲ့ပါတယျ။
ဇနျနဝါရီ ၉ရကျနတေု့နျးက Hyun Bin နဲ့ Son Ye Jin ဟာ နှဈယောကျသားလော့အိနျဂလြိဈကို ခရီးထှကျကွတယျဆိုပွီး သတငျးထှကျလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။အငျတာနကျသုံးစှဲသူတဈယောကျက “သူတို့နှဈယောကျခရီးအတူထှကျလာကွတာဖွဈမယျ။ယူအကျဈမှာ သူမရဲ့ မိဘတှနေဲ့ ထမငျးအတူစားနကွေတာ တှလေို့ကျရပါတယျ”ဆိုပွီးရေးတငျထားခဲ့တာပါ။Son Ye Jin ရဲ့ အဂေငျြစီကတော့ အဲ့ဒီပို့ဈဟာ မမှနျကွောငျး၊သူမက တဈယောကျတညျးခရီးထှကျသှားတာဖွဈကွောငျး၊ခါတိုငျးလညျး ဒီလိုပဲတဈယောကျတညျးခရီးတှထှေကျနကေပြါ”ဆိုပွီး ဖွရှေငျးခဲ့ပါတယျ။ဒါ့အပွငျ အဂေငျြစီက
Son Ye Jin ရဲ့ မိဘတှကေ ကိုရီးယားမှာပဲရှိနပေါတယျ။ဒါကွောငျ့ သူတို့ကို ယူအကျဈမှာ အတူတှမွေ့ငျရတယျဆိုတဲ့သတငျးက ဘယျနညျးနဲ့မှမဖွဈနိုငျပါဘူး”ဆိုပွီးထပျပွောခဲ့ပါတယျ။
Son Ye Jin နဲ့ Hyun Bin တို့ဟာ ၂၀၁၈ အတှငျးမှာ “The Negotiation”ဆိုတဲ့ဇာတျကားမှာအတူတှဲဖကျသရုပျဆောငျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ပရိသတျတှကေ သူတို့နှဈယောကျဒိတျရငျ ဝမျးသာကွမယျဆိုပမေဲ့ အဂေငျြစီတှရေဲ့ဖွရှေငျးခကျြအရတော့ ဘာမှသကျဆိုငျမှုမရှိကွောငျးတှရေ့ပါတယျ။သူတို့ရဲ့ ဇာတျကားလေးကလညျး အကျရှငျဒရာမာဇာတျကားလေးဖွဈတာကွောငျ့ ပရိသတျတှလေညျးအကွိုကျတှမေ့ယျထငျပါတယျ။မကွညျ့ရသေးရငျ ကွညျ့လိုကျဦးနျော